Igbo, John: Lesson 075 - Akwụkwọ ikpe ndị Juu na-akpọ Jizọs ka ọ nwụọ (Jọn 11:45-54) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 075 (The Jewish council sentences Jesus to death)
d) Akwụkwọ ikpe ndị Juu na-akpọ Jizọs ka ọ nwụọ (Jọn 11:45-54)
45 Ya mere ọtutu nime ndi-Juu, ndi biakutere Meri, hu ihe Jizos mere, ha kwere na Ya.
Lazarọs dị ndụ mgbe ọ nwụsịrị, na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma na-ekwu okwu. Ndị mmadụ na-ezute ya na ndụ na n'okporo ụzọ. Ọtụtụ ndị anya site ebube nke Jizos ma kwere na ọ bụ Mesaya ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ. N'ụzọ dị otú a, ndị na-eso ụzọ mụbara, ndị mmadụ wee gbaga n'ụlọ Meri iji hụ Jizọs na Lazarọs. Ha biara ịhụ Lazarọs, ma ha hapụrụ kwere na Jizọs.
46 Ma ufọdu nime ha jekuru ndi-Farisi, kọrọ ha ihe Jizos mere. 11:47 Ya mere ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi chikọtara nnọkọ-ikpé, si, Gini ka ayi nēme? N'ihi na nwoke a na-eme ọtụtụ ihe ịrịba ama. 11:48 Ya mere, ọ buru na ayi arapu ya, madu nile gēkwere na Ya, ndi Rom gābia kwa, wepu ebe-ayi na mba-ayi.
Ụfọdụ n'ime ndị hụrụ ọrụ ebube ahụ mere ngwa ngwa nye ndị Farisii ka ha nyefee ozi gbasara ọrụ Jizọs. Ha ka bụ ndị na-ekweghị ekwe, a na-atụgharịkwa ikpe Onyenwe anyị n'ahụ ha n'ilu banyere 'Ọgaranya', bụ onye Abraham zara, "Ọ bụrụ na ha agaghị ege Mozis na ndị amụma ntị, ha ga-ajụkwa onye bilitere na ya. ndi nwuru anwu "(Luk 16:31). Mmụọ nke Chineke apụghị ịgbanwe obi mkpịsị obi nke na-ajụ ịtụkwasị Jizọs obi, ọbụlagodi na a na-egosi ha ihe kachasị ebube.
Ndị Farisii nwere mmetụta dị ukwuu n'Ọgbakọ Kasị Elu nke ihe gbasara okpukpe. Nke mere na nnukwu ndị nchụàjà nyere ha aka. A kpọrọ mmadụ iri asaa n'ime ndị mmadụ ka ha kwurịta ya. Ndị Sadusii, bụ ndị na-agọnahụ mbilite n'ọnwụ, nabatara nzukọ nke Council. Ndị òtù ahụ enweghị nghọta na mgbagwoju anya ebe ọ bụ na Jizọs emeghị mmehie kpọmkwem maka njide. Otú ọ dị, e nwere mgbanwe Ndị Kraịst n'etiti ìgwè mmadụ tupu Ememme Ngabiga mgbe ọtụtụ iri puku ndị pilgrim na-abanye n'isi obodo ahụ. Na arụmụka ndị sochirinụ, ndị òtù Kọmitii kpọrọ Jisos dị ka mmadụ nkịtị, ọbụnadị onye nke Chineke ma ọ bụ onye amụma. N'agbanyeghị nkwenye a, ha enweghị ike ịhapụ ọrụ ebube ya.
N'oge a na-aga, ụjọ na-ekpuchi ikuku na Council ka ike ọchịchị nke eze ghara ịma ihe a ma mee. Nzukọ nke ìgwè mmadụ gburugburu otu nwoke nke na-arụ ọrụ ebube dịka Mesaịa si egosi na ọ bụ nnupụisi. Mgbe ahụ, ndị Rom ga-ahapụ ụlọ nsọ ahụ, ebe obibi Chineke. Mgbe ahụ, ọrụ ụlọ nsọ ahụ ga-akwụsị tinyere àjà, ekpere na ngọzi.
49 Ma otù onye n'etiti ha, Kaiafas, onye bu onye-isi-nchu-àjà n'arọ ahu, si ha, Unu amataghi ihe ọ bula; 50 ọ bughi kwa na ọ bara ayi nma ka otù onye nwua n'ọnọdu ndi-Ju; mba dum agaghị ala n'iyi. "51 Ma ọ bụghị nke a kwuru banyere onwe ya, kama ọ bụ nnukwu onye nchụàjà n'afọ ahụ, o buru amụma na Jizọs ga-anwụ n'ihi mba ahụ, 52 ọ bụghị naanị maka mba ahụ, kama ka o wee zukọta otu bụ ụmụ Chineke ndị gbasasịrị agbasasị.
Mgbe mgbagwoju anya na ọgba aghara nke Kansụl dị elu, nnukwu onye nchụàjà bụ keifas guzoro ma malite ịwakpo ndị ndú nke mba ahụ, na-ebo ha ebubo na ha amaghị ama na enweghị uche. O nwere ikike n'ihe o kwuru, ebe ọ bụ onyeisi oche nke Kansụl dị ka nnukwu onye nchụàjà. Ejiri ya manu tee mman, ihe nro nke idi nso, kamao b onye-emegide Kraist. Echore ya ka o juputa na Mo Nso, ka Chineke kwuo site na ya dika onye ndu nke mba. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gbasoro njehie na caprice. N'ịtụlee ọrụ onye amụma jikọtara n'ọkwá ya dị ka nnukwu onye nchụàjà, ọ kọwara ndị mmadụ niile dị ka ndị na-amaghị.
E gosiputara ụdị mmụọ ahụ nke kwuru okwu na Keifas, n'ihi na Setan na-ekwu okwu n'ime ya, o doro anya na ọ kwadoro nzube Chineke, ma na omume megidere ya. O doro anya na ọ dị mma ka ndị mmadụ na Nwa Atụrụ Chineke nwụọ n'ọnọdụ ha ka ha wee gbanahụ iwe Chineke wee nwee ndụ ebighi ebi. Ma ọnụ na-ekwuru Setan na-ekwupụta echiche dị otú ahụ maka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, "Ka Jizọs nwụọ iji zọpụta anyị n'aka iwe Rom." Site na amụma amụma Ekwensu Okwu Kraist kwusiri ike na ekwensu bụ nna n'ụzọ ime mmụọ nye ọtụtụ ndị Juu, n'ihi na ọ bụ onye ụgha na nna ụgha.
N'agbanyeghi echiche nke ekwensu, Jọn huru na keifas gosiputara ihe ojo ojo nke bu eziokwu nke Chineke. Keifas gha ịkọwa ọnwụ Jizọs dị ka mgbapụta maka mmadụ nile, n'amaghị ihe dị mkpa nke okwu ya "ikike." Onye na-amaghị ihe bụ onye na-amaghị ama bụ keifas, n'ihi na o kweghị na Jizọs, ọ bụ ezie na Mmụọ Nsọ mere ka ọ kwuo okwu na ọnwụ ọnwụ Kraịst. Ọ ghọtaghị echiche nke okwu nke ya n'ihi na o bu n'obi n'ezie.
Jọn onye na-ezisa ozi ọma, ghọtara ihe okwu a pụtara na mbara igwe ka nzọpụta maka ụwa. Jizọs anwụghị ịnwụ nanị n'ihi mmehie nke ndị ya, kama maka onye ọ bụla kwere ekwe n'etiti mba dị iche iche. Ndị niile tụkwasịrị ya obi bụ ụmụ nke Chineke, n'ihi ya, site n'ịtụkwasị Onye Nzọpụta ahụ obi, ha na-enweta ndu ebighi ebi.
Nzube nke okwukwe ayi abughi nani nzoputa onwe onye, kama odidi nke umu Chineke nile ibu ndi no nime Kraist. Ịhụnanya ya bụ ihe nnọchianya na ike nke Iso Ụzọ Kraịst. Aha ya na-eso ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ọ bụla ha jikọtara na etiti ha, ha na ibe ha. Ka ayi teta ma mee ngwa ngwa n'olu ya ka anyi mata na anyi bu umu nwoke na umu nwanyi n'ime ulo Chineke, ndi di nso karia uzo nke uwa.
53 Ya mere site n'ubọchi ahu gaa n'iru, ha b͕ara ìzù ka ha we me ka ọ nwua. 54 Ya mere Jizos adighi-ejeghari kwa n'etiti ndi-Ju ọzọ, kama o si n'ebe ahu pua ba n'ala nke di nso ọzara, rue obodo anākpọ Efraim. Ya na ndi nēso uzọ-Ya nọgidere n'ebe ahu.
Ụfọdụ n'ime ndị òtù kansul na-kpasuru iwe site keifas 'aka ike amụma, dịka ha nwere mmetụta maka Jizos, ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere obi ụtọ, na ha kwenyere na Chineke kwuru site n'aka Keifas iji nye onye ikpe ahụ ikpe ma chekwaa mba ahụ. Site na nkwekọrịta, Nzukọ ahụ nakweere ikpe ahịrị, ma kwenye na Keifas ' tụrụ aro igbu Jizọs. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụfọdụ n'ime ndị ahụ, ndị na-akawanye mma, na-eme mkpesa, ma ọ dịghị onye ṅara ntị. Caiaphas dị aghụghọ ji duhie ha n'ime atụmatụ igbu Jizọs ma mee nke a na nzuzo iji zere ọgba aghara n'etiti ndị mmadụ.
Jizọs nụrụ nke a ibé, na ma eleghị anya maara na ya site na Chineke nghọta. O hapuru ebe nke ochichi nke ndi ochichi wee gaa n'ugwu ndagwurugwu nke ndagwurugwu Jọdan nke Neblus, na-echere ya na ndi na-eso uz o ya maka oge awa ya na aja ya.
Ala agha ahụ aghọwo ihe doro anya. Mkparịta ụka ya na ndị nchụàjà kemgbe e mere ka ụlọ nsọ ahụ dị ọcha, na esemokwu ya na ndị dere iwu na ebe ọ bụ na ọ gwọrọ n'ụbọchị izu ike eruola njedebe na ịzụ Lazarọs. Ya mere, ndị isi obodo ahụ kpebisiri ike igbu onye ahụ mejọrọ ozugbo.
Ìhè ahu we nāmu n'ọchichiri, na ọchịchịrị na-adịghị merie ya.Ezigbo nwanna, ị hụla na Kraịst bụ ìhè? Oziọma Ya ò mere ka ị ghọta uche gị ma mee ka obi gị dị ọhụrụ? Ndụ ya ebighi ebi adakwasị gị, Mmụọ ya wee duru gị gaa nchèghari na ikwupụta mmehie gị, ma kee gị okwukwe ịgọzi ma mee ka ị dị nsọ? Meghee onwe gi iji kwe ka Mo nke Kraist duru gi, naputa ndu gi na ihe di n'iru ya, ka i ghara ikwe ka ndi iro Jizos ghara ime ihe n'ekpere ha. Kama nke ahụ, sonyere ndị na-eso ụzọ ya, ma mara Onye Nsọ ka i wee kwupụta, sị, "Anyị ahụwo ebube ya, otuto dịka nke ọkpara naanị Nna m mụrụ, juputara n'amara na eziokwu."
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, kelee gị maka ịghara ịgọnahụ eziokwu ahụ n'oge awa nke nsogbu; ị dịtụla otuto Nna gị nke eluigwe. Naghara okwukwe anyị na-adịghị ike. Mee ka ayi baa n'udo gi na Nna anyi, ibi ndu ebighebi ma jeere gi ozi n'emechighi. Nabata ndụ anyị ịbụ otuto maka amara nke ebube gị.
Gịnị mere ndị Juu kansul igbu Jizọs?
NNYOCHA - 4
zitere anyị azịza ziri ezi maka 15 n'ime ajụjụ 17 ndị a. Anyị ga-ezitere gị usoro ihe ọmụmụ a.
Olee ot'u Jizos si gosi ndi Ju na ha abugh umu Abraham?
Kedu àgwà nke ekwensu nke Jisos mere ka o doo anya
N'ihi gịnị ka ndị Juu ji chọọ ịtụ Jizọs nkume?
Gịnị mere ndị Juu ekweghị na-ekwe omume nke na-agwọ ọrịa nke nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ?
Gịnị ka nwa okorobịa a na-aghọta nke nta nke nta n'oge ya ajụjụ?
Gịnị ka ịkpọ isiala n'ihu Jizọs pụtara?
Gịnị bụ ngọzi Jizos-enye atụrụ ya?
Didie ke Jizos akabade edi eti ekpemerọn̄?
Olee otu Kraist si edu ìgwè ewu na aturu ya?
Olee otú Jizọs si kwusaa Chineke ya?
N'ihi gịnị ka Jizọs ji kwuo banyere ebube Chineke, ọ bụ ezie na Lazarọs nwụrụ?
N'ihi gịnị ka Jizọs ji nwee ọganihu iji zọpụta Lazarọs?
Gịnị mere Jizọs ji nwee nsogbu, gịnị mere o ji kwaa ákwá?
Olee otú ebube Chineke si pụta ìhè n'ịkpọlite Lazarọs n'ọnwụ?
Gịnị mere ndị nnọkọ Juu ji gbuo Jizọs?
Cheta ịde aha gị na adreesị zuru ezu na peeji nke ajụjụ nke ajụjụ, ọ bụghị naanị na envelopu ahụ. Ziga ya na adreesị a:
Mmiri nke Ndụ
Page last modified on March 05, 2020, at 06:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)